စိတ်ကူးပုံရိပ်: July 2008
ငါးပိကြော်၊ ထမင်းကြမ်းနှင့် ပေါင်မုန့်
တံခါးအဖွင့်မှာ အရာရာသည် တိတ်ဆိတ်လျက်။ အားလုံးနေသား တကျရှိနေသော အိမ်ကို ဝေ့ကာကြည့်ရင်း ဒီနေ့ညနေ ဘာစားရပါ့ဟု အစောတလျင် တွေးမိသည်။ တကြုတ်ကြုတ်နှင့် ဆာလှပြီ ဖြစ်သော ဗိုက်ကို ရေတစ်ခွက်နှင့် နှစ်သိမ့်ရင်း ရေခဲသေတ္တာကို ဖွင့်သည်။ ဗီရိုများကို ဖွင့်သည်။ တနေ့က လူကြုံပို့လိုက်သော ငါးပိကြော် တစ်ထုပ်က ရေခဲသေတ္တာထဲမှာ ဆီများခဲကာ လဲလျောင်းလျက်။ ထမင်းအိုးထဲမှာ ထမင်းကြမ်း တချို့ကျန်သေးသည်။ ဟန်မဆောင်နိုင်တော့ဘဲ ထမင်းကို အနည်းငယ်မျှ အပူပေးကာ ငါးပိကြော်နှင့် အားရပါးရနယ်စားမိသည်။
လက်ဖက်ရည် ဆိုင်သည် အရင်လိုပင် ဆူညံလှုပ်ရှား ရုန်းကန်လျက်။ စားပွဲထိုးလေး များသည် တ၀ိုင်းမှ တ၀ိုင်း လူးလာ ခေါက်တုံ့။ သူတို့ကို ကြည့်ရသည်မှာ ပျော်လာသလိုလို၊ မောလာသလိုလို။ သူနာရီကို မော့ကြည့်မိတော့ ဆယ်နာရီထိုးတော့မည်။ လက်ပတ်နာရီ မပတ်ဖြစ်တာ အတော်ကြာခဲ့ပြီ။ အချိန်တွေက သူ့ကို အမြဲတုပ်နှောင်သည်ဟု ထင်သည့်နေ့မှ စ၍ သူနာရီ မပတ်ဖြစ်တော့။ ရောက်တတ်ရာရာ တွေးရင်း သူငယ်ချင်းများ အလာကို စောင့်နေမိသည်။ မြန်မာပြည်ကို ပြန်ရောက်ပြီး ကတည်းက သူငယ်ချင်းများနှင့် မတွေ့ရသေး၍ စိတ်လှုပ်ရှား နေမိဆဲ။
` မကြာခင် လက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှာ ပိုပြီး အသက်ဝင်လာ သလို။
“ဟဲ့…. နင်က အရင်က ရုပ်အတိုင်းပဲ။ ငါက မှတ်မှ မှတ်မိပါ့မလားလို့။”
“ကြည့်စမ်း။ မိန်းမ နင်က ၀လာတာပဲ။ ရည်းစားတွေ ဘာတွေများရနေပြီလား။”
“နင်က ငါ့တို့ဆီကို စာတောင် မရေးဘူး။ ဘာတွေ မအားဖြစ်နေ သလဲ။”
အရင်ကလိုပင် သူတို့အားလုံး စကားလုပြောလို့ မပြီး။ သူတို့ဆီမှ ယနေ့မြန်မာပြည်၏ အတင်း၊ သတင်းမျိုးစုံကို ကြားရသည်။ ခေတ်နှင့်အညီ ရင်ဘောင်တန်းနိုင်ရန် သူတို့ဆီမှ ပြန်လည် သင်ယူရသည်။ ဘယ်ကြော်ငြာကတော့ ဘယ်လိုရယ်စရာ ကောင်းသည်၊ ဘယ်သီချင်းက ပေါက်သွားသည် စသည်ဖြင့်။ နှစ်နာရီခန့်ကြာသွား သည်ထင်သည်။ အားလုံးပြန်ကြမည်ဟု ထိုင်ရာမှ ထတော့သူ့အ၀တ်အစားကို ၀ိုင်း၍ သြဘာပေးကြသည်။
“ထမီတွေဘာတွေ နဲ့လား နိုင်ငံခြားပြန် ကြီးရဲ့။”
“အမယ်… မမ ပဲများနေတယ်ပေါ့၊ မြန်မာ အ၀တ်အစားတွေ ၀တ်လို့။”
“သြော်… ဖိနပ်ကလည်း ကတ္တီပါ ဖိနပ်နဲ့ကိုး။ အလှူသွားမှာကျ နေတာပဲ။”
“ဟယ်…နင်တို့ကလည်း သူကတခါတလေ မြန်မာပြည်ပြန်လာမှ ဒီအ၀တ်အစား ၀တ်ရတာ သူဝတ်ချင်မှာပေါ့။”
“အေးလေ…နင်တို့လို အမေကျော် ဒွေးတော်လွမ်း၊ စကပ်တဖားဖားနှင့် မဟုတ်ဘူး။ ကြည့်… ငါ့သူငယ်ချင်းက ဘယ်လောက် မြန်မာဆန် သလဲ။”
သူစိတ်နည်းနည်း တိုသွားသည်။ အရင်ကတည်းက သူမြန်မာအင်္ကျီနှင့် လုံချည်ကို နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက် ၀တ်တတ်တာ သူတို့ သတိမရတော့ ပြီလား။ ဒါမှမဟုတ် နိုင်ငံခြားမှ ပြန်လာသူများသည် မြန်မာ အ၀တ်အစား မ၀တ်တော့ဟူသော ပညတ်ချက် ရှိပါလေသလား။ သူ့မှာ မျိုးချစ်စိတ် ဆိုတာလည်း မပြင်းထန်ပါ။ နိုင်ငံခြားပြန်မို့ မြန်မာဆန် ပြလိုခြင်းလည်း မဟုတ်ပါ။ သေချာတာ ကတော့ သူ့မှာ ဘာမှ ပြန်လည်ချေပ စရာ မရှိ။
“အကြီးမက အခုနိုင်ငံခြားက ပြန်လာပြီးမှ အချိုးတမျိုး ပြောင်းနေတယ် မမရေ။”
အမေ့အသံကို သူအိပ်ခန်းထဲမှ ကြားတော့ ကြီးတော်ထံ အမေတိုင်နေပြီဟု ချက်ချင်း သိလိုက်သည်။
“အခုသူ့ အခန်းထဲကို အငယ်မက ၀င်မွှေရင် မကြိုက်ဘူး။ ကျွန်မ ၀င်ရှင်းပေးရင်လည်း မရှင်းနဲ့။ သူ့ဟာသူ လုပ်မတဲ့။ သူ့အခန်းတံခါးကိုလည်း ခေါက်ပြီးမှ ၀င်ပါတဲ့။ ကြီးကျယ် လာပုံများ။”
သူစာတိုပေစ လေးများ ရေးတတ်သည်မို့ သူ့အခန်းထဲမှာ သူမပြချင်သော စာများ သူတပါးမြင်လျှင် မကြိုက်။ နိုင်ငံခြားနှင့် ဘာမျှ မဆိုင်ပါ မေမေဟု အော်ပြောချင် စမ်းလှသည်။
“ဟိုတနေ့က ကျွန်မဆီကို စာတစောင်လာလို့ ဟဲ့ ဘာရေးထားလဲလို့ မေးတော့၊ မေမေ့စာဆိုတော့ သမီးလည်း မသိဘူးလေတဲ့။ ကျွန်မက ဟဲ့ ဖောက်ဖတ်လိုက် ပါလားလို့ ပြောတော့မှ ဖတ်တယ်။ သီးသန့်ဆန် လာတာလေ။ အမေနဲ့ သမီးတောင် ဒီလောက် ခွဲခြားနေရ သလား။ နိုင်ငြံခားမှာ အနေကြာလို့ အဲဒီက အကျင့်တွေ ကူးလာတယ် ထင်ပါရဲ့။”
လူဆိုတာ ကိုယ့်ကိုယ်ရေး ကိုယ်တာ ရှိရမှာပေါ့၊ မေမေရဲ့။ သူမကျေမနပ်နှင့် အခန်းထဲမှ ဆက်နားထောင်သည်။
“နောက်ပြီး ကျွန်မကိုများ ဆရာလုပ်လိုက်သေး။ သူ့ဦးလေးကိစ္စကို ကျွန်မက ၀င်ပြောမိလို့ မေမေရယ် ကိုယ့်ဟာကိုယ် အေးအေးဆေးဆေး နေပါတဲ့။ သူများကိစ္စ ၀င်မပါပါနဲ့တဲ့။ ကိုယ့်ဦးလေး အရင်းခေါက်ခေါက် ကြီးကိုများ သူများတဲ့။”
ဟုတ်တယ်လေ… မေမေတို့ပဲ အဲဒီကိစ္စတွေနဲ့ စကားများကြ၊ စိတ်ဆိုးကြနဲ့။ ရှင်းရှင်းနေတော့ မကောင်းဘူးလား။ သူတိုးတိုး ရေရွတ်ပြန်သည်။
“သြော်..ကော်ဖီဆိုရင်လည်း အခုခါးခါးမှ ကြိုက်တယ်တဲ့။ ဘလက်ကော်ဖီပေါ့။ ကော်ဖီမစ်တို့ ဘာတို့မရတော့ဘူး။ ဘိုမက…။”
မေမေကလည်း မနက်ကျရင် ပဲပြုတ်နဲ့ ထမင်းကြော်ကို ကော်ဖီနဲ့စားတာ တော့မပြောဘဲနဲ့ဟု သူတွေးမိပြန်သည်။
“အင်း သူအပြင်ထွက်သွားတယ် ထင်တယ်။ ဟဲ့ အငယ်မ.. နင့်အမ အပြင်ထွက် သွားတယ် မဟုတ်ဘူးလား။ ဟင်…အခန်းထဲမှာ…။ ကြည့်စမ်း… အခန်းထဲမှာ ရှိနေတာတောင် ကိုယ့်ကြီးတော် လာတာ ထွက်မတွေ့ဘူး။ နိုင်ငံခြားရောက် ပြီးမှ အကျင့်က…။”
ရှေ့က စာအုပ်ကို ပိတ်ကာ ခြေဆန့်လက်ဆန့်လုပ်မိတော့ ညဆယ်နာရီခန့် ရှိနေပေပြီ။ စာဖတ်ရင်း ညဖက်မှာ ဆာလာတတ်သော အကျင့်ကို သူဘယ်တော့မှ ဖျောက်နိုင်မည် မသိ။ မီးဖိုချောင်ထဲမှာ ရှိနေသော အစားအစာများကို လိုက်ကြည့်မိသည်။ ဒီညတော့ ထမင်းမစား ချင်တော့။ သူ့ဖေဖေကတော့ ငါ့သမီးဟာ ဘိုမပဲ၊ ပေါင်မုန့်ဆို သိပ်ကြိုက်တယ်ဟု ပြောဖူးသည်။ ဘိုမ ဟုတ်မဟုတ်တော့ မသိ၊ အလွယ်တကူ စားလို့ရသော ပေါင်မုန့်ကို သူကြိုက်မိတာ အမှန်ပင်။ ဘိုဆန်ချင်၍ ပေါင်မုန့်စားခြင်း မဟုတ်သည်ကိုတော့ ဖေဖေ သိစေချင် ပါသည်။
ပုလင်းထဲသို့ ရောက်ခဲ့ပြီဖြစ်သော ငါးပိကြော်ကို မျက်စောင်းထိုး ကြည့်သည်။ ပေါင်မုန့်ဆိုသည်မှာ အမြဲတမ်းထောပတ်နှင့် ဒိန်ခဲနှင့်မှ စားရသည်ဟု မည်သူက သတ်မှတ်ထား ပါသနည်း။ ဒီနေ့တော့ ပေါင်မုန့်ကို ငါးပိကြော်နှင့် စားရမည်။ အနောက်နှင့်အရှေ့စာကို ပေါင်းစားတယ် ဆိုပေမယ့်လည်း စားကောင်းရင် ပြီးတာပဲ။ အချိန်အခါ အရ တခါတလေမှာ ငါးပိကြော်နှင့် ထမင်းကြမ်းက လိုက်ဖက်သလို၊ ငါးပိကြော်နှင့် ပေါင်မုန့်ကလည်း စားလို့ကောင်းသည်ပဲ။
Posted by ပုံရိပ် / Pon Yate at 10:097comments: Links to this post
“အိပ်မပျော်တဲ့ ညတိုင်း အတွေးများလည်း အိမ်ပြန်ချင်တဲ့ အလွမ်းတွေပဲ….”
သူသီချင်းကို အသံမကြား ရတော့တဲ့ အထိ တိုးပစ်လိုက်သည်။ အိမ်ပြန်ချင်တဲ့ အလွမ်းတွေ တဲ့။ အိမ်… အိမ်ဆိုတာကို သူလွမ်းပါသေး သလား။ မရှိတော့တဲ့ အရာတစ်ခုကို လွမ်းလို့ ရပါသလား။ ဒါမှမဟုတ် မရှိတော့သည့် အရာတစ်ခု မို့ပဲ လွမ်းလာလေသလား။
သူလွန်ခဲ့သော ဆယ်စုနှစ် အတွင်း အိမ်များစွာ ပြောင်းခဲ့ရသည်။ ပထမဆုံး အိမ်က အိမ် မမြည်လှသည့် အခန်းကျဉ်းလေး တစ်ခု။ စာရေးစားပွဲ တစ်လုံး၊ ကုတင်တစ်လုံးနှင့် စာကြည့်မီးတိုင် တစ်ခု။ သူအခန်း ခြေရင်းတွင် သူပိုင်ဆိုင် သမျှ အ၀တ်အစား အားလုံးကို စုထည့်ထားသော သေတ္တာတစ်လုံး ရှိနေသည်။ အိပ်ယာဘေးတွင် သူသိပ်ကြိုက်သော အဆိုတော်၏ပုံ အကြီးကြီး တစ်ပုံ။ ခေါင်းရင်းတွင် အမေထည့်ပေး လိုက်သော ဘုရားပုံတစ်ပုံ။ သူ့အခန်းမှာ အဆောင်အယောင် ကင်းမဲ့လွန်းလှ ပါသည်။ ရိုးစင်းမှုကို သူမမှုသော်လည်း ခြောက်သွေ့မှုကို သူမုန်းမိသည်။ သူ့တနေ့တာ ကုန်ဆုံးချိန်၌ အခန်းသည် ခြောက်သွေ့စွာ သူ့ကို ဆီးကြိုလျက်။ အခန်းထဲသို့ ၀ယ်လာသော ထမင်းနှင့်ဟင်းမှာ အေးစက်ကာ နေပြီ။ တချို့ညများမှာ သူလက်ဖက်ရည် တစ်ခွက်၊ ကော်ဖီတစ်ခွက်ကိုသာ ကျိုက်ရင်း အိမ်တစ်လုံး အကြောင်းကို စဉ်းစားကာ နေမိတော့သည်။
ဒုတိယနေရာသည် ပထမနေရာထက် ပိုကောင်းသည်ဟု သူထင်သည်။ သူ့တောင့်တသည့် အတိုင်း အတန်ငယ် ကျယ်ဝန်းသော တိုက်ခန်းလေး တစ်ခုကို သူရခဲ့သည်။ အိပ်ခန်း၊ မီးဖိုချောင်နှင့် ထမင်းစားခန်း အားလုံးပါသည်။ ဧည့်ခန်းမပါသော်လည်း သူ့အတွက် အရေးမကြီး။ သူ့မှာ ဧည့်သည် များများစားစား ရှိတာမှ မဟုတ်တာပဲ။ ရှိသော ဧည့်သည်များကလည်း ထမင်းစားခန်းနှင့် မီးဖိုချောင်မှာပင် ကျေနပ်နေကြသည်။ ခက်တာက ရေချိုးခန်း။ ထိုအိမ်ခန်းအတူ ပါလာသော ရေချိုးခန်းတွင် သူဘယ်တော့မှ နေသားမကျခဲ့။ အုတ်ကန်ကြီး တစ်ခုတွင် ဘေးအခန်းမှ လူများနှင့် မျှချိုးရသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ ယောက်ျားလေး တစ်ယောက် အနေနှင့် ဇီဇာကြောင်လွန်းသည်ပဲ ဆိုဆို သူကတော့ ရေချိုးလျှင် တစ်ယောက်တည်း လွတ်လွတ်လပ်လပ် ချိုးရမှ။ ကိုယ့်အတွေးနှင့်ကိုယ်၊ ကိုယ့်သီချင်းနှင့်ကိုယ်။ သည်ရေချိုးခန်းကြောင့်ပဲလား၊ တယောက်တည်း နေရ၍ပဲလား မသိ၊ ထိုအခန်းလေးကို သူ့အိမ်ဟု အပြည့် သဘောမထား နိုင်ခဲ့။
သူ့ရဲ့ ယာယီအိမ်ကို….. အိမ်ဟု သဘောထားနိုင်ခဲ့သော အိမ်။ ချစ်သူ….။ သူ့အိမ်ကို အိမ်နှင့်တူအောင် ဖန်တီးပေးခဲ့သော ချစ်သူ။ သူတို့ အားလပ်ရက်တိုင်း သူ့အိမ်ကို ချစ်သူ ရောက်လာကာ ထမင်းနှင့်ဟင်းကို စိတ်ပါလက်ပါ ချက်ပေးခဲ့သည့် မီးဖိုချောင်။ သူ့မီးဖိုချောင်လေးမှာ ကျဉ်းသောကြောင့် သူတို့နှစ်ယောက် တိုက်မိကြတိုင်း တစ်ယောက်မျက်နှာ တစ်ယောက်ကြည့်ကာ ရယ်မောခဲ့ကြသော အချိန်ကာလများ။ သူတို့နှစ်ဦး နှစ်သက်စွာ သီချင်းတွေ အတူနားထောင် ခဲ့ကြသည့် ကက်ဆက်ကလေး။ ချစ်သူကိုယ်တိုင် ရွေးချယ်ပေး၍ သူ့အခန်းတွင် ချိတ်ပေးခဲ့သည့် ပန်းချီကားလေး တစ်ချပ်။ ဒီအငွေ့အသက်တွေနှင့် နေရသည့် အခန်းလေးမို့ သူထိုအိမ်မှာ ပျော်ပိုက်တာ တကယ်တော့ မဆန်းလှပါ။ သို့ပေမယ့် ကံကြမ္မာက အခြေအနေ မပေးသောကြောင့် သူတို့နှစ်ယောက် လမ်းခွဲခဲ့ရသည့် အခါမှာလည်း သူအလွမ်းတွေနှင့် ထိုအိမ်ကလေးကို တွယ်တာ နေမိ၏။ အိမ်ကတော့ သူ့အိမ်မဟုတ်ခဲ့ပါ။
အိမ်…။ သူအရင်တုန်းက နေခဲ့သည့်အိမ်။ မွေးကတည်းက နေခဲ့သည့် အိမ်ကရော။ နှစ်ပေါင်းများစွာ အိမ်မှထွက်လာပြီးနောက် အိမ်ပြန်ရမည့် အချိန်ကို သူပျော်ရွှင်စွာ မျှော်လင့် နေခဲ့သည်။ အိမ်ပြန်ရတော့မည်။ အိမ်ပြန်ရ တော့မည် တဲ့လား။ မိသားစုနှင့် သူငယ်ချင်းတွေ၊ မိတ်ဆွေများ အတွက် လက်ဆောင် ပစ္စည်းများကို စုဆောင်းရင်း စိတ်လှုပ်ရှားစွာ အိမ်ပြန်ချိန်ကို စောင့်စားခဲ့သည်။
အိမ်ကိုရောက်တော့၊ သူမျှော်လင့်ခဲ့သော အိမ်ကို ရောက်တော့….။ သူနှစ်ပေါင်းများစွာ ရင်းနှီးခဲ့သော ကြမ်းပြင်တို့သည် အချိန်၏ တိုက်စားမှုဖြင့် မှေးမှိန်ခဲ့ပြီ။ ညနေတိုင်း သူထိုင်ကာ စာဖတ်ခဲ့သော တံခါးပေါင်ကို လက်ဖြင့် အသာ ပွတ်တိုက်ရင်း အရင်က ထိုင်ခဲ့သော တံခါးပေါင်ကလေးကို သူလွမ်းဆွတ် နေမိသည်။ သူငယ်စဉ်က မိုးရွာတိုင်း ရေငွေ့တို့ဖြင့် ရေးဆော့ခဲ့သည့် ပြတင်းမှန်တို့သည် ခုတော့ အသစ်ဖြစ်ခဲ့ပြီ။ သူသိပ်ကြိုက် ခဲ့သော ကက်ဆက်လေး၏ နေရာတွင် သူ့ညီလေး ၀ယ်ထားသော နောက်ဆုံးပေါ် ကက်ဆက် အသစ်တစ်လုံး ရောက်၍ နေသည်။ သူဂစ်တာထိုင်တီး ခဲ့သော အိမ်ရှေ့မှ အုတ်ခုံလေးသည် မိုးရေတိုက်စားမှု ဖြင့်ပြိုယွင်း နေပြီ။
ဟောင်းသော်လည်း အရင်အတိုင်း မဖြစ်ပြီ။ သစ်တိုင်းလည်း မကောင်းခဲ့ပြီ။ သူဘယ်သူ့ကို အပြစ်တင်ရမည် မသိ။ အရင်က အိမ်သည် မရှိတော့ပြီ။ အမေနှင့် အဖေသည် သူပြန်လာသည့် အတွက် ၀မ်းသာ၍ မဆုံး။ အမေသည် သူကြိုက်သော ဟင်းများကို တစ်မျိုးပြီး တစ်မျိုးပြီး ချက်ကျွေးရင်း ပျော်နေတော့သည်။ သူပြန်လာရသည်ကို ပျော်သော်လည်း သူသည် အိမ်သို့ပြန်မရောက် ခဲ့တော့ပြီ။ အရင်က သူတွယ်တာခဲ့သော အိမ်ကို ဘယ်တော့မှ ပြန်မရောက်နိုင်ပြီကို သူရေးရေး နားလည်လာသလို။ အတိတ်ကို ပြန်မရနိုင် သလို၊ သူ့ငယ်ဘ၀ကို ပြန်မရနိုင် သလို၊ သူ့စိတ်တွင်းမှ အိမ်ကလေးသည် ဟိုးအဝေးမှာ ကျန်ခဲ့ပြီ။ သူသည် အိမ်ကလေးနှင့် အတူ ပြောင်းလဲခဲ့ခြင်း မဟုတ်။ သူ၏ အပြောင်းအလဲ များကိုလည်း အိမ်ကလေးက မသိခဲ့။ ထို့ကြောင့် သူနှင့် အိမ်ကလေးသည် ဝေးကွာခဲ့ပြီ။
အဇ္ဇျတ္တတွင် စွဲငြိမှု မရှိတော့ပြီမို့ သူ့တွင်အိမ်မရှိ တော့ပြီလား။ ဒီလိုနဲ့ပဲ သူ့မှာ ကိုယ်ပိုင်အိမ်မရှိကြောင်း တဖြည်းဖြည်း သဘောပေါက် လာခဲ့သည်။
Posted by ပုံရိပ် / Pon Yate at 08:436comments: Links to this post
ဆားချက်သည်ဟု မထင်စေလိုပါ။ ပုံရိပ်တစ်ယောက်ကတော့ ငပျင်းပဲဟုလည်း မထင်စေလိုပါ။ (ပျင်းတာတော့ ပျင်းတာပေါ့လေ။) အာဇာနည်နေ့ရောက် ပြီမို့ တခုခုတင်ချင် လှပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ရေးရင်လည်း ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်က ရေးခဲ့တဲ့ စာလောက် စိတ်ကျေနပ်မှာ မဟုတ်တဲ့ အတွက် ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကစာ ကိုပဲ ပြန်လည်ဆန်းသစ် ပါရစေ။ ဖတ်ပြီးတဲ့ ဘလောက်ဂါ သူငယ်ချင်းများရေ... တောင်းပန်ပါတယ်။ ဒါပြီးရင် အသစ်တင်ပါ့မယ်။
Posted by ပုံရိပ် / Pon Yate at 08:43 No comments: Links to this post
Labels: ၀တ္ထုတို, အခြား
- I know what I have to do now. I gotta keep breathing. Because tomorrow the sun will rise. Who knows what the tide could bring? Chuck Noland